ရိုင်ယန်ဂစ်ပြောလာတဲ့ ပေါ့ဘာမရှိတော့ရင်ဖြစ်လာမယ့် မန်ယူကွင်းလယ်ခရီးကြမ်း – FBV SPORT NEWS
ရိုင်ယန်ဂစ်ပြောလာတဲ့ ပေါ့ဘာမရှိတော့ရင်ဖြစ်လာမယ့် မန်ယူကွင်းလယ်ခရီးကြမ်း….
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ခရောင်းလမ်းများစွာ ကို ဖြတ်သန်းရတော့မယ့်အနေအထားကို ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ…မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ မကြာသေးခင်ကဘဲ ချန်ပီယံလိဂ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပြန်ခရီးကိုနှင်ခဲ့ရပါတယ်…..
အဲ့ဒီအိမ်ပြန်ခရီးပြီးတဲ့နောက်မှာ ယူရိုပါလိဂ်ခရီးကြမ်းနဲ့ အတူ ကွင်းလယ် မှာ ပေါ့ဘာကို လက်လွတ်ဆုံးရမယ့် မန်ယူကွင်းလယ်အခြေနေဟာ ဘယ်သူတွေဘဲ ရှိပါတယ်ပြောနေပါစေ အင်အားချိနဲ့ သွားတာအမှန်ပါဘဲ….ပေါ့ဘာမရှိတော့ရင်ဖြစ်လာမယ့်အခြေနေကို မန်ယူ ဂန္တဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီး ရိုင်ယန်ဂစ်က MUTV မှာပြောပြလာပါတယ်….
ရိုင်ယန်ဂစ်က ” ကျနော်တို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကို အရမ်းစိတ်ပူမိတယ်….ပေါ့ဘာ ဟာ ဘာလို့ထွက်သွားရတာလဲ အိုလေက ဘာလို့ထွက်သွားခွင့်ပြုရတာလဲ ဆိုတာကို ကျနော် မစဉ်းစားတတ်ဘူး….ဒါကသူတို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတချို့တွေပါရင်ပါသွားနိုင်နေပြီလေ….မန်ယူမှာ ပေါ့ဘာမရှိတော့ရင် ကွင်းလယ်က ရုန်းကန်ရမယ့်အနေအထားတွေအများကြီး ကြုံလာပါပြီ….
ဘရူနိုက ပြည့်စုံတဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားပါ …..ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဘာလို ကွင်းလယ်မှာ ဘောလုံးဖြန့်ဝေမှုရော တိုက်စစ်ကိုရော လိုက်ကစားပေးနိုင်တဲ့ နောက်တယောက်က လိုပါတယ်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ မန်ယူသမိုင်းကြောင်းတွေပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ပေါလ် ရယ် ကားရစ် ရယ် ကျနော်ရယ် ဟာ အပြောင်းအလဲ ကစားလို့ရတဲ့အနေထားတွေ အများကြီးရှိတယ် ဖလက်ချာ ဟားဂရေစ့် အန်ဒါဆန် ဒီလို အစုအဖွဲ့မျိုးပြန်ရဖို့ အိုလေအနေနဲ့ အတတ်နိင်ဆုံး ထိမ်းသင့်တယ်…
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ပေါ့ဘာမရှိတော့ရင် ကွင်းလယ်ဟာ ပျက်စီးသွားပြီး ယခု လက်ရှိ ကစားနေတဲ့ကစားကွက် အရဆို မန်ယူ ဘယ်လိုမှ အဆင့်လေး စားရင်း မဝင်နိုင်တော့သလို ဖလားအိမ်မက်တွေလည်း ပျောက်ကွယ်ရပါတော့မယ်…..ဒါကို ကစားသမားနဲ့ နည်းပြတွေ ကောင်းကောင်းသိဖိုလို့နေပါပြီ….ကျနော်ကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို အရမ်းစိတ်ပူမိပါတယ်.ဆိုပြီး ထပ်ဆင့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…